भद्रगोल खेलेका जुम्ल्याहा दिदी बहिनीले शिशिर भण्डारी बिरुद्ध मुद्धा हाल्दै ? गीतबाटै यस्तो कुरा आयो (भिडियो हेर्नुस) – Etajakhabar
यसैबिच यि दुई जुम्ल्याहा दिदी बहिनीहरुले शिशिर बिरुद्ध मुद्धा हाल्ने कुरा गरेका छन् । किन हाल्दै छन् त जुम्ल्याहा दिदी बिहनीहरुले शिशिरलाई मुद्धा ? के गल्त गरे शिशिरले ? किन धरोधर्म मुद्धा हालिदिन्छु भनेर कस्सिएका छन्, यि दुई ? यो भिडियो हेर्नुस सबै, भित्री रहस्य यस्तो रहेछ-
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र ०७, २०७५ समय: १३:४१:००
अवतरणमा समस्या भएपछी तीन वटा चिनियाँ जहाज डाइभर्ट गरियो